I-China ekhethekileyo ethengisa i-Aluminiyam ye-Aluminiyam engenaManzi Izibane zeSitalato i-Cobra 100W Isibane sesitalato se-LED Izibane ze-Fixtures abavelisi kunye nabanikezeli | Kasem
Izibane eziKhethekileyo eziThengisayo eziTshayo ze-Aluminiyam engangenwa ngamanzi ezitalatweni i-Cobra 100W yesiTalato izibane zoLungiso lwezibane ze-LED
Ubushushu boMbala (CCT): 2700K-6500K
Isibane esiLuminous (lm/w): 100
Inkonzo yezisombululo zokukhanyisa: Ukukhanyisa kunye noyilo lwesekethe, uyilo lwe-LitePro DLX, uyilo lwe-Agi32, uFakelo lweProjekthi
Ubomi (iiyure): 36000
Ixesha lokuSebenza (iiyure): 30000
I-Lamp Luminous Flux (lm): 110-120lm / w
Ubushushu bokusebenza(℃): -20 - 60
Igama Brand: Kasem okanye OEM
Inombolo yomzekelo: COBS-30-200
Umbala: Mnyama, Mthubi Grey
Ubonelelo lwaMandla: AC
Isibane soMzimba weMathiriyeli: Ingxubevange yeAluminiyam
Umthombo wokukhanya kwe-LED: Epistar
Igama lemveliso: Led Street Lamp
I-engile: 120 °
Izinto eziphathekayo: iAluminiyam+Isigqubuthelo seglasi
Umzekelo No owerrw Ubungakanani bokukhanya Iichips ze-LED Into evikela amanzi PCS/CTN Ubungakanani bokupakisha
KASEM-20w 2ow 11.7"9.2*2.7 2835 SMD IP65 60pcs/ctn 39*32.5*23
KASEM-30W 3oww 16*12.1*2.3 2835 SMD IP65 60pcs/ctn 51.5*32.5*29
KASEM-300w 30ewe 45*34*5.8 2835 SMD IP65 10pcs/ctn 47.5*40*30
Ukukhanya okuphezulu kakhulu: I-300W led parking lot light light, umgangatho ophezulu kunye nomgangatho ophezulu we-SMD3030 LED izibane zokulondoloza amandla, Akukho flicker, kunye nokusebenza okuphezulu kwe-36000LM, ekhanyayo njengokukhanya kwemini, Ukukhanyisa ngokulula iindlela, iindawo zokupaka kunye nezinye iindawo ezinkulu, kwaye inye kuphela engakwazi. khanyisa indlu yakho yonke ngasemva.
Ukusetyenziswa kwamandla aphantsi:Gcina amatyala ombane, ukhetho oluyimfuneko lokutshintsha izibane zangaphambili ezisetyenziswa kakhulu. I-300W led yokupaka ukukhanya ingathatha indawo ye-1000-1200W HID / HPS, ikunika i-75% yokonga kumatyala ombane, ukonga amakhulu eedola.
Yomelele kwaye yomelele:Izinto eziqinileyo ze-aluminium ziqinisekisa ukuhlala kunye nokutshatyalaliswa kokushisa okusebenzayo. Irediyetha ithatha uyilo olungenamngxuma ukonyusa indawo yokulahla ubushushu, ukukhawulezisa ukuhamba komoya, ukukhusela itshiphu yesibane, kunye nokubonelela ngeeyure ezingama-50,000+ zokukhanya okuhlala ixesha elide.
Iwaranti yeminyaka emi-5:Ukuba unayo nayiphi na imibuzo xa usebenzisa ukukhanya kwethu okukhokelwayo yokupaka, njengeengxaki zemveliso, umonakalo wemveliso, ukufakwa, njl., nceda uqhagamshelane nathi kuqala. Siya kuphendula kwiiyure ezingama-24 kwaye siqinisekise ukwaneliseka kwakho.
Umthombo wokukhanya oPhezulu we-LED
Iichips ze-LED ezihlala ixesha elide kunye nee-LED, ziqinisekisa ukusebenza okuphezulu ngaphezu kwe-50,000 yeyure yokusetyenziswa.
Iqokobhe eliqinileyo kunye ne-IP65 yokungangeni manzi
Ukukhanya kwendawo yokupaka lulwakhiwo lwe-aluminiyam yokufa, ingenamanzi ngokupheleleyo kunye nothuli, ifanelekile kuzo zombini iindawo ezimanzi kunye nezifumileyo.
IiChips eziSebenza kakuhle ngokuKhanyayo
-I-Chip eDityanisiweyo eJiyileyo kabini
-IChip eZinzile ngakumbi
-Ngakumbi Ukugcina Amandla
UMqhubi oSebenza ngamandla
Isibane sethu se-LED esakhiwe ngekhwalithi ephezulu yomqhubi we-LED, sinika ubuncinane iiyure ezingama-50000 zobomi, zisebenza kakuhle kwaye zigcina umbane.
-Unyango lokuTyakala koMphezulu
-Ikhuselekile kwaye iZinzile
Umgangatho ophezulu weAluminiyam yesibane soMzimba
-Umgangatho ophezulu we-aluminiyam yokuphosa
-Ipeyinti yokubhaka enemigangatho emininzi
-Ukutshatyalaliswa kobushushu obunamandla
-Isiphumo esigqwesileyo sokutshatyalaliswa kobushushu
-Ukubumba okwexesha elinye
-Ukungenwa ngamanzi kunye nobungqina bokufuma
Q1. Yintoni MOQ yakho? Ngaba ndingayenza iodolo encinci ye-QTY ngexesha lokuqala?
A: Kubathengi abatsha, i-odolo encinci ye-QTY yamkelwa okokuqala. Kwaye isixa esikhulu osibekayo, ixabiso elingcono esinokulinikezela.
A: Kuxhomekeke kubungakanani. Ngokuqhelekileyo kuthatha malunga neentsuku ezili-15 emva kwentlawulo yediphozithi yethu
gqiba iodolo.(Ngaphandle kweemveliso ezilungiselelwe wena)
Q3. Leliphi ixesha lokuhlawula?
A: Ngokuqhelekileyo sikhetha i-T / T, iqonga le-alibaba.
Q4. Mingaphi iminyaka oqinisekisa ngayo iimveliso zakho?
A: Kwiimveliso zethu ezininzi, sinokunika iwaranti yeminyaka emi-3; Ukukhanya kwezorhwebo yiwaranti yeminyaka emi-2.
Q5. Ngaba unokwenza i-ODM, iimveliso ze-OEM?
A: Ewe, i-ODM, umyalelo we-OEM wamkelwe.
Q6. Indlela yokuqhuba umyalelo wemveliso yokukhanyisa?
A: Okokuqala Sazise iimfuno zakho okanye isicelo sakho.
Okwesithathu uMthengi uqinisekisa iisampulu kunye nediphozithi yeendawo zokuodolwa ngokusesikweni.
Q7. Inkonzo ethembekileyo emva kokuthengisa:
A: Abathengi banokukhokelwa sithi ukudubula naziphi na iingxaki; Siya kubonelela ngeentsimbi ezaneleyo kwiprojekthi nganye;
Iiyure ezingama-24 isisombululo sexesha lokufowuna okanye ukunxibelelana nge-imeyile sihlala sikhona.
Ngaphambili: IBhalbhu yokuKhanya okuNgxamisekileyo eHlaziywayo yoMbane wokuMyelwa kweNkampi uMsebenzi waNgaphandle 9W 800LM E26 3000K 5000K
Okulandelayo: ukukhanya okukhokelela egadini
100w 120w 150w Ip65 umenzi waseTshayina ophezulu lum...
IP65 LED Isitiya ukukhanya 80w isitiya izibane Park ...
igadi yelanga yangaphandle ukukhanya kwendlela yeglasi ...